1। एफडीए स्वीकृत वजन घटाने औषधी: लोर्सेसरिन एचसीएल
2। Lorcaserin को त्वरित अवलोकन (846589-98-8)
3। Lorcaserin तंत्र को क्रिया
4। कसरि Lorcaserin लिनुस्
5। छुटेको खुट्टा
7। अतिरिक्त टक-अप जब Lorcaserin मा
8। Lorcaserin को साइड इफेक्ट्स
9। Lorcaserin को भण्डारण
10। Lorcaserin को उचित निपटान
11। Lorcaserin Obeses बाट समीक्षा
12। Lorcaserin पूरक
13। क्रस Lorcaserin एचसीएल अनलाइन
14। Lorcaserin एचसीएल (Belviq) मा सारांश
एफडीए स्वीकृत वजन घटाने औषधी: लोर्सेसरिन एचसीएल
के तपाईं शरीर को वजन खोने को एक सुरक्षित तरिका को थकान र अप्रासंगिक workouts को बारे मा परेशान नगरी बिना खोज रहे हो? प्रयास गर्नुहोस् हप्तामा। पत्ता लगाउनुहोस् कसरी पूरै प्रभावकारी हुन्छ, एक्लोपनको लोरस्केसन तंत्र, र किन यो एफडीए को अनुमोदन जीता।
अहिलेसम्म, अमेरिकी जनसंख्याको 31% को बारे मा अधिक वजन वा मोटाइ हो। थप तथ्याङ्कहरूले पुष्टि गर्दछ कि वयस्कहरूको 69% जुन 20 वर्ष भन्दा बढी छन् मोटाइ वा अधिक वजन। शाब्दिक, यसको मतलब यो कि यस उमेर ब्रैकेट भित्र हरेक 10 वयस्कों मा, तपाईं6पीडितहरुलाई नमूना गर्न सक्नुहुन्छ। उच्च विद्यालयका 30% को बारेमा या तो मोटाइ वा अधिक वजन हुन्छ।
मोटापालाई सम्बोधन गर्ने एकमात्र पक्का तरीका नियमित workouts, आहार योजना, गैस्ट्रिक बैंड शल्य चिकित्सा, वा वजन-हानिकारक औषधिहरूको प्रयोगको माध्यम हो। यद्यपि स्मिमिङ गोलहरू केही शरीर पाउन्डहरू भाँडोमा निकै प्रभावकारी हुन्छन्, तिनीहरू हृदय वाल्व क्षतिसँग जोडिएका हुन्छन्। यसबाहेक, मानसिक स्वास्थ्य समस्याहरूको सम्भावनाबारे थुप्रै चिन्ताहरू छन्।
2012 सम्म, लोरस्सरिन पूरक, बेल्वीक को रूपमा पनि जानिन्छ, असुविधाजनक स्वास्थ्य कारणहरु को कारण कभी वजन घटाने वाला नुस्खा गोली नहीं था। तर त्यसोभए, एक अमेरिकी अनुसन्धानले धेरै व्यक्तिहरूलाई बनाएको यो पिटलाई मानव र हृदयमा कुनै स्वास्थ्य स्वास्थ्य असरको साथ सुरक्षित र प्रभावकारी साबित भयो। ती व्यक्तिहरूले यसलाई शारीरिक गतिविधिमा संलग्न र कम-क्यालोरी आहारमा हाल्ने शर्तमा5-10% को औसत शरीर गुमाउन सक्छ।
मोटाइब्रेट बनाइयो अधिक वजन
त्यसैले, के मोटापा र अधिक वजनबीच के फरक छ? यदि तपाईंको शरीर मास इन्डेक्स (बीएमआई) 30kg / m भन्दा अधिक छ2त्यसपछि तपाईं मोटा हुनुहुन्छ। यदि मान 25 र 29.9kg / m को बीचमा टिक्स हुन्छ2, त्यो अधिक वजन भएको छ। तपाईंको शरीरमा कसरी सिन्फिफ्रेन्स एचसीएल काम गर्दछ?
मोटापाको मूल कारण धेरै स्पष्ट छैन तर कारणहरू आनुवंशिक, मेटाबालिक, शारीरिक र व्यवहारिक कारकहरू वरपर घुमाउने कारणहरू हुन्। यस अवस्थाको जटिलता मधुमेह mellitus, हृदय रोग, hyperlipidemia, apnea, फैटी जिगर रोग, उच्च रक्तचाप, र केहि क्यान्सरों को कारण हुन्छ।
यूएस अध्ययन लोर्सेसरिन को हृदय रोग सुरक्षा को खुलासा गर्दछ
एफडीएले मात्र स्थानीय मांग वा मोटापछि रोक्न यसको प्रभावशीलताको कारण लोरस्सेरिन पूरकको प्रयोगलाई स्वीकृत गरेन। प्रमुख कारक जसले यसको पुष्टि गर्यो नेतृत्वको प्रमुख अमेरिकी अध्ययन हो जुन 3.3 वर्षमा गरियो।
पोस्ट गरिएको अध्ययनको सन्दर्भमा औषधिको नयाँ इङ्गल्याण्ड जर्नल, लोरसेसर दुवै मोटाइ र अधिक वजन को रोगी को लागि वजन प्रबंधन को लागि एक विश्वसनीय ड्रग साबित हुन्छ।
शोधकर्ताहरूले अनियमित रूपले 12000 रोगहरू चयन गरे जुन केवल वजन कम मात्र थिएन तर विभिन्न हृदय रोगहरूको पनि पीडित। यस समुहबाट, केही मानिसहरू दैनिक प्राप्त गर्न नियुक्त गरियो लोरसेसर खुराक जबकि बाकी एक स्थानबोटी लिनुभयो।
एक वर्ष पछि, Lorcaserin दिइएका रोगहरु को 39% र placen समूह मा 17%% कम वजन कम5को वजन घटाने दर्ज। यद्यपि यो पर्याप्त छैन, लोरस्सिन समूह मधुमेह को विकास को निचला जोखिम मा थियो, यद्यपि केहि पेटेंटहरु गंभीर हाइगोग्लीमिया संग समाप्त हुनेछ।
जब एक तुलना प्रतिभागिहरु लेजरसेसर लिन र उन placebo मा उन को बीच गरे, वहाँ समूह मा वृद्धि हृदय रोग को कुनै रेकर्ड छैन। केवल कि लोरस्सेसनले केवल अन्य विधिहरूको तुलनामा वजन घटानेको गति बढाउँछ।
Lorcaserin र हार्ट वाल्व रोग
त्यसोभए, किन मानिसहरूले मानिसलाई विचार गरे कि लोरस्सरिन हृदय वाल्व क्षतिसँग बाँधिएको छ? मलाई बयान गर्न देउ…
त्यहाँ मानव प्रणालीमा 14 विभिन्न प्रकारका 5-HT रिसेप्टरहरू छन्। एक serotonin 2C agonist हुन, लार्ससेनन 5-HT मा लक्षित गर्दछ2C केन्द्रीय तंत्रिका तंत्र को रिसेप्टर। तर त्यसो गर्दा, यो रिसेप्टर 5-HT सँग सम्बन्धित छ2B र 5-HT2A रिसेप्टरहरू।
यो भन्न छ भने, यदि 5-HT2C उत्तेजित छ, अन्य रिसेप्टरहरू सक्रिय हुनको एक समान मौका छ। यो serotonin वजन घटाने दबाइहरुमा धेरै सामान्य छ, यसैले, प्रयोगकर्ताहरु को बीच हृदय वाल्व समस्याहरु र पुर्मन उच्च रक्तचाप को प्रसार।
यस अवस्थामा, 5-HT मा लोरस्सारिनको आत्मीयता2C 100 बाट 5-HT भन्दा ठूलो छ2B रिसेप्टरहरू। दैनिक खुट्टा बाध्यकारी भावनाहरूको लागि उत्तरदायी छ। यदि तपाईं ओभरडोज गर्नुहुन्छ भने, तपाइँ सीमाभन्दा बढी हुनेछौं र अतिरिक्त रकम रिसेप्टरको बाँकी बाँध्नु पर्छ। जबकि 5-HT को सक्रियता2B वाल्वुलर हृदय रोग, 5-HT को उत्तेजना पैदा गर्दछ2A मूड परिवर्तनका लागि नेतृत्व गर्दछ, 'उच्च', उत्साह, र भित्री भावना।
हाल, हप्तामा एकमात्र उपचार हो जुन 5-HT को उत्तेजित गर्दछ2B बिना हृदय रोग हानिकारक वा पुर्माना उच्च रक्तचाप बिना।
खाद्य र औषधि प्रशासन (एफडीए) ले पहिले 2012 को अमेरिकी वयस्कों मा Belviq को पर्चे को अनुमोदन को मंजूरी दी। यो प्राधिकरण तीन वर्ष पछि भयो एरेना फार्मास्यूटिकल्स र ईआईईई इंक ले एनडीए को दायर गरे (नयाँ औषधि अनुप्रयोग) Lorcaserin को लागि। यसले एफडीएलाई दुई वर्ष लगाइएको थियो, अन्तिम निर्णय दिन अघि, लोरस्जरिनसँग सम्बद्ध क्लिनिकल मामला अध्ययन सहित डेटा सेट गर्न।
लगभग दुई दशकको लागि अब Belviq एफडीए को अनुमोदन जीतने को लागि पहिलो स्लिमिंग गोली हुन्छ। यद्यपि यो अमेरिकामा इजाजतपत्रित औषधि ड्रग हो, यो अझै यूरोपमा स्वीकृत गरिएको छैन।
Lorcaserin को त्वरित अवलोकन (846589-98-8)
Lorcaserin एचसीएल (846589-98-8)
Lorcaserin हाइड्रोक्लोराइड serotonin रिसेप्टर agonists को वर्ग को लागि एक कच्चे माल हो। यो सीएएस संग एक रासायनिक यौगिक हो 846589-98-8
यस रासायनिक को विस्तृत विवरण मा डुबकी देओ ...
उत्पादन नाम Lorcaserin हाइड्रोक्लोराइड
रासायनिक नाम (R)-8-Chloro-1-methyl-2,3,4,5-tetrahydro-1H-3-benzazepine hydrochloride
CAS no। 846589-98-8
पिघ्ने बिन्दु (डिग्री सेल्सियस) 193 - 200
रूप सेतो पाउडर
आणविक वजन 232.15
आणविक सूत्र C11H15Cl2N
घुलनशीलता (25 ° C) पानी
DMSO (डीमिथाइल सल्फोक्साइड)
भण्डारण तापमान -20 (° C)
कार्य Serotonin 2C रिसेप्टर एग्रोनस्ट
उपयोग वयस्क वजन व्यवस्थापन
· (R) -1H-3-benzazepine, 8-chloro-2,3,4,5-tetrahydro-1-methyl-, हाइड्रोक्लोराइड
ध्यान दिनुहोस् कि लोरस्सारिन हाइड्रोक्लोराइड एक फार्मा ग्रेड कम्पाउन्ड हो। यद्यपि धेरै रासायनिक भण्डारहरूमा सजिलै उपलब्ध छ, यो प्रयोगशाला अनुसन्धान, विकास, र लागूपदार्थ खोजी उद्देश्यका लागि कडा रूपमा प्रयोग गर्नुपर्छ। यो मानव प्रयोगको लागि होईन, र त्यसैले, रोगीहरू बिक्री गर्न योग्य छैन।
Lorcaserin एचसीएल सुरक्षा डेटा पाना
वर्गीकरणको GHS प्रणालीको साथमा, लोरस्सरिन हाइड्रोक्लोराइड श्रेणी को चिल्लो वर्ग हो। यसले कोडहरू दिन्छ। H302, P264, P301, P312, र P330। यो निगल, भयावह, इन्जेसन, वा छालाको सिधा सम्पर्कमा विषाक्त हुन सक्छ।
पहिलो सहायता उपाय
लोरसेसर इन्जेस्टनको अवस्थामा, धेरै सफा पानीको साथ पीडाको मुखलाई धोएर। अर्को 15 मिनेटको लागि रिलिजसँग जारी राख्नुहोस्, व्यक्तिलाई होशियार हुन्छ। यदि कुनै बेहोश भएमा कुनै मौखिक प्रशासन दिन प्रयास नगर्नुहोस्।
यदि छालामा आइपुगेको छ भने सफा पानी र हल्का साबुनको मात्रामा च्याउन्छ। यदि आँखामा, केही चलिरहेको पानी प्रयोग गर्नुहोस् तिनीहरूलाई 15 मिनेटको लागि कुल्ला गर्न। धेरै राम्ररी प्रयोगशाला प्रयोगशालाहरूले सुरक्षा भित्ताहरू र आकस्मिक प्रतिक्रिया लिँदा सुविधाको लागि एउटा भिडन्त स्थापना गरेको छ।
यदि पीडित व्यक्तिहरूले लोरस्सरिन एचसीएलको रूपमा, ताजा हावासँग कोठामा स्थानान्तरण गर्दछन्। यदि सास फेर्न गाह्रो हुन्छ भने कृत्रिम श्वसन प्रयोग गर्नुहोस् र चिकित्सा सहायता खोज्नुहोस्।
प्रयोगशाला कोट, सुरक्षा चश्मे, र रासायनिक प्रतिरोधी दस्ताने पहनें। साथै, एनआईओएसएच द्वारा प्रमाणित गरिएको श्वेयररेटर प्रयोग गर्नुहोस्।
हैंडलिंग र भण्डारण
प्रयोगशालामा, धुलो, धूल, स्प्रे, वा कुनै पनि हवाई स्रोतमा नसुनाउनुहोस्। जोखिमको समय धेरै सकेसम्म सीमित गर्नुहोस्। स्टोरेजको अवधिमा, लेजरसेन्सन भण्डारण गर्नमा भण्डारण गर्न र यसलाई अन्य प्रयोगशाला प्रयोगकर्ताहरूबाट सुरक्षित रूपमा बन्द गर्नुहोस्।
Lorcaserin मानक र नियन्त्रित अवस्थाहरूमा स्थिर छ। तथापि, तपाईले यसलाई बलियो अक्सिडेंटबाट टाढा राख्नुपर्दछ किनभने यो उत्पादन घटाउने ट्रिगर हुन सक्छ। Byproducts नाइट्रोजन, कार्बन मोनोअक्साइड, कार्बन डाइअक्साइड, र हाइड्रोजन क्लोराइड को अक्साइड हो।
Lorcaserin तंत्र को क्रिया
Lorcaserin एक serotonin 2C रिसेप्टर एग्रोनिस्ट हो। मानव 5-HT को लागी औषधि एक उच्च आलोचना छ2C। यसले हाइकोथलामसमा विशिष्ट रसायनहरूलाई लक्षित गर्छ, जुन भूखको लागि जिम्मेवार हुन्छ।
मलाई यो वैज्ञानिक रूपमा व्याख्या गर्न अनुमति दिनुहोस् ... Belviq केन्द्रीय तंत्रिका प्रणाली (सीएनएस) संग विशेष गरी हाइपोथोममस मा। लागूपदार्थ 5-HT लाई लक्षित गर्दछ2C रिसेप्टरहरु, जो arcuate nucleus भित्र प्रो-opiomelanocortin न्यूरॉन्स मा पाइन्छ। यो कार्यले अल्फा-एमएसएचको रिलीजलाई संकेत गर्दछ, जुन एक भूख को दबाएर melanocortin-4-रिसेप्टर्स मा अभिनय हार्मोन हो। मस्तिष्क को यो भाग भूख को विनियमित गर्दछ कि जब सक्रिय हो, यो शरीर को संकेत हुनेछ कि तपाईं धेरै भन्दा अधिक छ।
जब लिइन्छ, दबाइले खपत खपत कम गर्छ र संतोषको भावनाको बारेमा लिन्छ। यद्यपि तपाईं अझै एक स्वस्थ कम-कैलोरी आहारमा खुवाउनुहुनेछ, Belviq ले तपाईंको cravings नियन्त्रण गर्नेछ। तपाईं यति सानो खाएर पूरा हुनुहुनेछ। Ipamorelin लाभ र इम्पोरेलिन प्रयोग मा मार्गदर्शन
एक भूख-द्रष्टव्य हुनु, उपचारले मोटाइ र अधिक वजन मा रोगीहरूलाई वजन घटाने सुविधा दिन्छ। यसबाहेक, यो निश्चित वजन-सम्बन्धी अवस्थाहरू जस्ता उच्च रक्तचाप, हृदय रोग, र II मधुमेह टाइप गर्न मद्दत गर्दछ।
यो औषधि प्रभावकारी हुन को लागी, ले एक भौतिक गतिविधि र एक दिनचर्या को एक स्वस्थ आहार योजना को शामिल गरेको छ। त्यहाँ कुनै विशेष आहार छैन पालन गर्न तर कम क्यालोरीहरूमा चिपचिँदै फायदेमंद हुन सक्छ। यदि तपाईं पूर्ण वर्षमा लोरस्सिनलाई निरन्तरता दिनुहुन्छ भने, तपाईले तपाइँको शुरुआती शरीरको वजनको 3.5% गुमाउनु हुनेछ।
तथापि, त्यहाँ केही दुर्लभ घटनाहरू छन् जसमा औषधीको स्लिमिङ प्रभाव छैन। उदाहरणका लागि लिनुहोस्, तपाईं विश्वासपूर्वक लगभग तीन महिनाको लागी औषधि प्रयोग गर्नुहुन्छ, तर तपाईंको शरीरमा कुनै पनि उल्लेखनीय परिवर्तनहरू छैनन्। खैर, यो कुरा हो जहाँ तपाइँ उपचार रोक्न र आफैंलाई निराशाबाट बचाउनु पर्छ। यदि तपाईं चौथो हप्तामा केही उचित पाउण्ड गुमाउन सक्नुहुन्न भने, अब औषधिबाट लाभ उठाउने कुनै आशा छैन।
Lorcaserin कसरी लिने?
एफडीए मानक अनुसार विनियमित भएकोले, लोरस्सरिन केवल 30kg / m को शरीर मास इन्डेक्स (बीएमआई) सँग वयस्कों द्वारा लिइन्छ।2 र माथि। यदि तपाइँ वजन-सम्बन्धी प्रकार II मधुमेह, उच्च रक्तचाप, वा हृदय रोगबाट पीडित हुनुहुन्छ भने, तपाइँ अझै पनि शर्तमा औषधि प्रयोग गर्न योग्य हुनुहुन्छ जुन तपाईंको BMI कम्तीमा 27kg / m हुन्छ।2.
Belviq प्रिस्क्रिप्शन सूचना
रोगीले चिकित्सकको निर्देश अनुसार प्रति दिन दुई पटक 10mg ट्याब्लेटलाई मौलिक रूपमा लिनु पर्छ। आदर्श रूपमा, तपाईंले औषधि व्यवस्थापन गर्नु राम्रो परिभाषित समय अन्तरालहरूमा। ट्याब्लेट बिना पूर्ण ट्याब्लेट निलो पार्नुहोस् वा यसलाई क्रश गर्नुहोस्। तपाईं आफ्नो प्राथमिकता वा डाक्टरको सिफारिशको आधारमा लेजरस्सिनिन खुसीसँग खाना वा बिना बिना लिन सक्नुहुन्छ।
यदि तपाईंले आफ्नो चिकित्सकबाट पर्याप्त निर्देशनहरू प्राप्त गर्नुभएन भने, तपाई सँधै प्रिस्क्रिन लेबलको साथ पुष्टि गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईंले परिणामहरू हस्तक्षेप गर्न सक्नुहुनेछ किनभने तपाईले निर्धारित गर्नुभएको भन्दा कम समय नदिएको वा केहि पनि लिनुहोस्।
यो Belviq ले भरपूर जीवन भर को सिफारिश को लागि सिफारिश को छ कि केहि वजन संग सम्बन्धित रोगहरु को काउंटर। तपाईंको डाक्टरले सल्लाह नगरेसम्म, तपाईं कहिल्यै रोकिनु हुँदैन lorcaserin खुराक.
के तपाइँ एक निर्धारित खुराक सम्झनुभयो? यस विचारले तपाईंलाई हिट तुरुन्तै लिनुहोस्। तथापि, जब अर्को खुट्टाको लागि पहिले नै समय हो, केवल तपाइँको नियमित तालिकाको साथ जारी राख्नुहोस् र छुटेको खुट्टाको बारेमा बिर्सनुहोस्।
यदि तपाईं Belviq को एक ट्याब्लेट भन्दा बढी आफैसँग सामान गर्नुहुन्छ भने, तपाइँ पछि केही गम्भीर लक्षणहरू र साइड इफेक्टहरू अनुभव गरिरहेका छन्। ओभरडोजको अवस्थामा, औषधीले तपाइँलाई यसको प्रभाव लिनु अघि तुरुन्तै जहर नियन्त्रण केन्द्रमा छोड्नुहोस्। मद्दतलाइन नम्बर 1-800-222-1222 हो।
केहि लक्षणहरूमा मूड परिवर्तनहरू, चक्करपना, विषाणु, उच्च महसुस, पेटको दुखाइ, टाउको दुख्ने, वा हजुरबुबाहरू हुन सक्छन्। चरम अवस्थाहरूमा पर्दाहरू, सासिस गर्दा कठिनाइहरू वा बिस्तारै छन्, आन्तरिक सेवाहरूको लागि 911 लाई रिंग गर्नुहोस्। किन सिब्रामामिन वजन घटाने मा धेरै लोकप्रिय छ?
त्यहाँ केहि घटनाहरू छन् जहाँ लोरस्सरिन दुर्व्यवहार गर्न सकिन्छ। उच्च खुट्टाहरूले प्रयोगकर्तालाई "उच्च" महसुस गर्न र हलचलहरू ट्रिगर गर्न सक्छन्। यो आदत-निर्माण हो र यसैले लागूपदार्थ निर्भरता उत्पन्न गर्न सम्भव छ। यसको कारण, औषधि प्रवर्तन प्रशासनले अनुसूची IV पदार्थको रूपमा वर्गीकरण गरेको छ।
विशेष सावधानता जब Lorcaserin वजन घटाने औषधी मा
लोर्सेसरिन (बेल्वीक) ले गर्नु अघि
आफ्नो डाक्टरलाई जानकारी दिनुहोस् यदि तपाइँ कुनै पनि औषधिमा एलर्जी हुनुहुन्छ। फार्मासिस्टको सहयोगमा, निर्देशन पुस्तिकाबाट पुष्टि गर्नुहोस् यदि लोरस्जरिनमा अवयवहरूले एलर्जी प्रतिक्रियालाई प्रोत्साहन दिन सक्दछ।
यदि तपाईं कुनै अन्य उपचार सहित, पर्चा, नुस्खा वा हर्बल उत्पादनहरू छन् भने, औषधकर्तालाई सूचित गर्न सुनिश्चित गर्नुहोस्। यो महत्वपूर्ण छ किनकि यसले औषधी-लागू औषधिको सम्भावनालाई सम्भावित बनाउन मद्दत गर्दछ र यसले शरीरमा लोरस्सारिनको फार्माकोडाइमिक्सलाई कसरी प्रभाव पार्छ। फलस्वरूप, डाक्टरले तपाईंको एंटी डायबिनेट औषधि खुराक समायोजन गर्न र साइड इफेक्टहरूमा नजिकको घडी राख्न बाध्य हुन सक्छ।
औषधीय रूपमा, Belviq र केही अन्य औषधिहरू बीच लागूपदार्थ सम्बन्धी जीवन-खतरा हुन सक्छ। साधारण उदाहरणहरू माइग्रेन्स, अवसाद, चिसो वा मानसिक रोगहरूको लागि लागू औषधहरू हुन्। यहाँ चित्रमा राख्न औषधि र ड्रग सामग्रीको पूर्ण सूची हो;
Tricyclic एंटीडेस्प्रेन्टेंट्स (टीसीए) जस्तै nortriptyline, trimipramine, protriptyline, amitriptyline, doxepin, clomipramine, amoxapine, या imipramine
फ्लोरोटेइन (सर्फेम), सीरट्र्रिन, पार्सिलिन (पेक्सिल), एस्केलिटप्राम, सिटिओप्टर, र फ्लोवोक्सामिन जस्तै चयनिक सीरोटोनिन रिप्पेक इनबिटर्स (एसएसआईआरआर)
Dextromethorphan (ठट्टा दबाइहरुमा सामान्य)
Venlafaxine (Effexor) र duloxetine सहित चयनात्मक नोरपाइनफाइनल रीप्टेक इनबिटर्स (एसएनआरआई)
मोनोआमीइन अक्साइडेस इनबिटर्स (MAOIs) जस्तै linezolid, tranylcypromine, मेथाइलिन नीलो, isocarboxazid, selegiline, र phenelzine
सेन्ट जन्सको वर्ट र Tryptophan जस्तै वजन घटाने दबाइहरु
Dysfunction को लागी उपचार
इन्सुलिन जस्तै मधुमेह नुस्खाहरू
ध्यान दिनुहोस् कि लोरस्सेसर ले अधिक वजन को रोगहरु को वजन घटाने को कारण बनता छ। यदि तपाइँसँग मधुमेह टाइप II छ भने, तपाईं गोली लिँदा कम रक्त शर्कराको अनुभव गर्ने क्रममा हुनुहुन्छ। यसकारण, तपाईंले आफ्नो रक्त शर्कराको स्तरलाई बारम्बार निगरानी गर्नुपर्दछ र खुट्टा परिवर्तन गर्न आवश्यक पर्दा तपाईंको डाक्टरसँग सम्पर्क राख्नुपर्दछ।
मानसिक रोगको उपचार
ज्लिटिटिपन, सुतुतपतन, रित्तिप्रिप्ट, फ्रिटरटिपन, एल्मोट्रिटान, नाटकट्रिटान, र ईलेटिपिपन (रिस्पैक्स) सहित माइग्र्रेन हेडसेच प्रबन्ध गर्ने औषधि।
कोडिन (केही खांसी र दुखाइ औषधिमा उपलब्ध)
Bupropion (Zyban, forfivo, aplenzin)
अन्य वजन घटाने पूरक
फार्मासिस्टले तपाईले लिनु भएको पोषक तत्वको पूरक, जडीबुटीहरू, वा वजन-हानि उत्पादनहरू थाहा पाउनुहोस्।
गर्भावस्था र नर्सिङ
Lorcaserin मातृत्वको लागि एक ठूलो दुश्मन जस्तो देखिन्छ। स्लिमिंग ट्याब्लेट तपाईँका लागि होइन यदि तपाई पहिल्यै गर्भवती हुनुभयो वा कुनै चाँडै गर्भ गर्ने योजना बनाउनुहुन्छ। यो ड्रगले तपाईंको भ्रूणको सम्भावनालाई भ्रूण असामान्यताहरूमा ल्याउन मद्दत गर्नेछ। एकपटक तपाईंले खुवाउँदा गर्भवती हुनुहुँदा तपाईंलाई केही सल्लाहको लागि तुरुन्तै तपाइँको डाक्टरलाई फोन गर्नुहोस्।
त्यसोभए Belviq गर्भवती अवस्थामा किन निस्केको छ? यो कारणले गर्भवती हुँदा वजन घटाने समय बर्बाद हुन्छ। अधिक के छ, एक चूहहरुमा राखिएको एक अध्ययन ले थाहा भयो कि सन्तान आफ्नो जीवन मा कम शरीर को वजन मा समाप्त हुन्छ।
लोरस्सरिनमा यो स्तनपानको लागि पनि सल्लाह छैन। यद्यपि औषधी स्तन दूध मार्फत जान्छ र बच्चालाई हानिकारक हुन कसरी व्याख्या गर्न को लागी कुनै विश्वसनीय रिपोर्टहरू छन् भने, यो क्षमा भन्दा राम्रो छ भन्दा राम्रो छ।
हृदय र रक्त कोशिका सर्तहरू
यदि तपाइँसँग रक्तचाप सम्बन्धी केहि समस्यापूर्ण हृदय समस्या र स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्याहरू छन् भने, तपाइँको डाक्टरलाई सूचित गर्न सुनिश्चित गर्नुहोस्। यसमा समावेश छ;
लेक्कैमिया (सेतो रक्त कोशिकालाई असर पार्छ)
एकाधिक माइलोमास (प्लाज्मा सेलहरुमा)
सिबल कोशिका एनिमिया (रातो रगत कक्षको आकारलाई असर गर्दछ)
पेनिस विकृतिहरू (पार्सोनी रोग, एन्कोलेशन, वा गुफा फाइबर्रोसिस)
आहार र व्यायाम
तपाईंको भोजनमा क्यालोरी कम गर्नुहोस् र नियमित रूपमा व्यायाम गर्ने प्रयास गर्नुहोस्। त्यसो गरेर, तपाईंको स्वास्थ्यलाई बढावा दिन्छ र वसा-जलाउने प्रक्रियामा गति बढाउँछ। Lorcaserin शारीरिक गतिविधिहरु संग राम्रो काम गर्दछ।
तपाईंको रक्त शर्कराको निरीक्षण गर्नुहोस्
यदि तपाईंले II मधुमेह टाइप गर्नुभयो भने, लोरस्जरिनको वजन-हानि प्रभाव कम रक्तचापको स्तर हुन सक्छ। सधैँ आफ्नो रिपोर्ट डाक्टरसँग साझा गर्नुहोस् जुन खुसीको वर्णन र समायोजन गर्दछ।
आफ्नो डाक्टरको नियुक्तिसँग राख्नुहोस्
कम्तिमा, डाक्टरले तपाईंको प्रगतिलाई औषधिको साथ जाँच गर्नेछ, तपाइँको प्रणालीलाई कस्तो उत्तरदायी छ, र तदनुसार तपाईंलाई सल्लाह दिन्छ।
अतिरिक्त टक-अप जब Lorcaserin मा
सम्पूर्ण लोरस्सिन ट्याब्लेट निलो पार्नुहोस् तर चुरोट नगर्नु, विभाजन गर्नुहोस् वा क्रश
खुल्ला वृद्धि नगर्नुहोस्। Belviq को लागि, एक ट्याबलेट दैनिक दुई पल्ट तर Belviq XR को लागि, एक ट्याब्लेट प्रति दिन एक पटक पर्याप्त हुन्छ।
प्रत्येक औषधिस, पूरक, वा उत्पादनहरू पहिले तपाईं लिनु भएको वा Belviq मा हुँदा तपाईंको औषधकर्तालाई प्रकट गर्न निश्चित गर्नुहोस्
यदि तपाईं5हप्ता पछि कम से कम 12% वढी हानि प्राप्त गर्नुभएन भने लोरस्सरिन को प्रयोग लाई विच्छेद गर्नुहोस्।
खतरनाक मशीनरी वा ड्राइभिङ्ग सञ्चालन नगर्नुहोस्, किनकी औषधिले तपाईंको एकाग्रता, स्मृति, र ध्यान दिन सक्ने क्षमताको साथ हस्तक्षेप गर्न सक्छ। केवल यदि तपाईं विश्वस्त भएमा लोरस्ज़रिनले तपाइँको मानसिक अवस्थालाई असर पार्दैन भने मात्र यो गरौं
यदि गर्भवती हो भने औषधि नदिनुहोस्
लिनका लागी लोरस्सरिन जोखिमहरू, यसको साइड इफेक्ट, जीवन-खतरनाक प्रतिक्रियाहरू र फाइदाहरू बुझ्नुहोस्। यदि लक्षणहरू गम्भीर हुन्छन् भने, चिकित्सा ध्यान खोज्नुहोस्
सबै तरिकाले, स्तनपान गर्दा यसलाई बचाउनुहोस्
के छैन लोरस्सिनिन प्रयोग गर्नुहोस् serotonergic ड्रग्स, डोपामिन एंटीगोनस्टिस, या tryptophan जस्तै अन्य आहार पूरक संग संयोजन। यी औषधिहरू बीचको कुराकानीले सिरोटोनिन सिंड्रोम वा न्यूरेलेप्टिकिक घातक सिन्ड्रोम (एनएमएस) जस्तो लक्षणहरूको सम्भावना सम्भव छ।
यदि तपाइँसँग केहि अन्तर्वार्तात्मक समस्याहरू छन् भने, वजन घटाने औषधी लोरस्सिनिन लिनु भन्दा पहिलेको बारेमा तपाईंको डाक्टरसँग बोल्नुहोस्
यो औषधि मात्र मोटाइ रोगहरू र कम से कम 27kg / m को बीएमआई हुने2र एक वजन सम्बन्धी कमजोरी।
यदि तपाईं मोटे हुनुहुन्छ भने लोरसेसर लिन नदिनुहोस् तर अझै पनि 18 वर्ष भन्दा कम उमेरको एक सानो
यो अरूको साथ यो गोली बाँड्नुहोस्
क्लिनिकल सावधान र लोर्सेसरिन Contraindications
लोरस्सिन लिनुहोस् तपाईको जोखिममा वा निम्न सावधानीको साथमा तपाईले निम्न सर्तहरू पाउनुभयो;
गम्भीर गुर्दा हानि
लोरस्सारिन सामग्रीहरूलाई हाइपरसेनिटिटिटी
ब्रडीकार्डकार्डियाको इतिहास (<50BPM को ढिलो हृदय दर)
बधाई हृदयको विफलता
लोरसेसर लिन रोक्न;
यदि तपाईं हृदय वाल्व रोग र कञ्चनशील हृदयको विफलताको लक्षणहरू विकास गर्नुहुन्छ भने
प्रतिकूल प्रतिक्रियाहरू र गम्भीर लक्षणहरू
यदि दबाइले सबै काम गर्दैन, जस्तै कि तपाईं चार महिना पछि कुनै फरक सूचना देखाउन सक्नुहुन्न
जब तपाईंको डाक्टरले तपाईंलाई रोक्न सल्लाह दिन्छ
दबाइले तपाइँको रक्त गणनालाई असर गर्दछ जुन सेतो रक्त कोशिका, लेक्कोयोटिज, लिम्फोसाइट, र न्यूट्रोसाइट
निरन्तर आत्मिक व्यवहार, विचारहरू, वा कार्यहरू
Lorcaserin को साइड इफेक्ट्स
धेरै औषधीहरू जस्तै, लोरस्सरिनले साइड इफेक्टहरूको कारण हुन सक्छ। तथापि, यी केही लक्षणहरू अस्थायी हुन सक्छन् र तपाईंको शरीरले लागू औषधमा हराउनेछन्। यदि एक पक्ष प्रभाव रहन्छ भने, तुरुन्तै तपाईंको फार्मासिस्टलाई सम्पर्क गर्नुहोस्।
साधारण तर कम से कम लक्षण
प्रायः दर्दनाक, या कठिन पेशाब
विजुली जस्तै कि धुलोपन परिवर्तन गर्दछ
सोझो अनुहारमा कठिनाइहरू जस्तै गिरिँदै वा सुतिरहेका छन्
मांसपेशियों को दर्द
थकान वा थकान
दुर्लभ अवस्थामा, साइड इफेक्टहरू गम्भीर हुन सक्छ, यसैले, आपातकालीन चिकित्सा ध्यानका लागि कल गर्दै। तिनीहरू समावेश छन्;
हलचलहरू (गैर-अवस्थित चीजहरू हेर्न वा सुने)
उच्च महसुस गर्दै
अचानक मूड परिवर्तनहरू
मांसपेशी जुत्ता, कठोरता, वा स्पाजमहरू
अनीशिया (मेमोरीको अस्थायी हानि)
आत्मिक विचारहरू र प्रयासहरू
सुत्न हात, खुट्टा, खुट्टा वा हातहरू
अनियमित हृदयघात (छिटो वा ढिलो)
विघटनको भावना (तपाईंको शरीरबाट बाहिर निस्कन्छ)
विशेष गरी पुरुषहरु मा छाती को बढावा
प्रोलिक्टिनको वृद्धिको कारण स्तन बाट दुलही निर्मूलन
Priapism (लामो समय सम्म र पीडादायक छानबिनहरु6घण्टा भन्दा बढी टाढा छ)
यद्यपि हामीले लोरस्जरिन गोलीको सबै सम्भावित लक्षणहरू र साइड इफेक्टहरू कवर गर्न खोजेको भए तापनि तपाइँले केहि कुरा अनुभव गर्न सक्नुहुनेछ जुन माथिको सूचीमा नहुन सक्छ। यद्यपि, यो मात्र अजीब अवसरमा हुन्छ।
चरम अवस्थामा, प्रभावहरू रिपोर्ट गर्न सुनिश्चित गर्नुहोस् एफडीएको अनलाइन रिपोर्टिङ कार्यक्रम। तिनीहरूको सुविधाजनक हाइलाइन 1-800-332-1088 हो।
Lorcaserin को भण्डारण
यो औषधि एक तल्लो सील कन्टेनरमा भण्डार गर्नुहोस्, अधिमानतः यसलाई पोतमा राखियो। यसलाई नमी र अधिक गर्मीबाट टाढा राख्नुहोस्। यद्यपि त्यहाँ कुनै विशिष्ट भण्डारण तापमान छैन, मानक परिस्थिति भित्र कुनै पनि मान स्वीकार्य छ। 25 ° C सही छ तर 15-30 ° C को दायरा एकदम सही छ।
अनधिकृत व्यक्तिहरूको पहुँचलाई रोक्नको लागि एक सुरक्षित स्थानमा वजन घटाने औषधि लोरसेसरलाई लक गर्नुहोस्। ध्यान दिनुहोस् कि औषधि एक नियन्त्रण पदार्थ हो र दुरुपयोग हुन सक्छ। यसबाहेक, यो बच्चा वा अन्य कुनै व्यक्तिलाई डाक्टरको नुस्खा बिना यो जहर हुन सक्छ।
Lorcaserin को उचित निपटान
एफडीए, EPA, र DEA नियमहरू अनुसार औषधि कचाइको रूपमा लोरस्सरिनको निषेध गर्नुहोस्। शौचालय तल नदिनुहोस्, यसलाई पानी नालीमा प्रवाह गर्न अनुमति दिनुहोस् वा रद्दीटोकरीमा खारेज गर्नुहोस्। पानीमा घुलनशील हुनु, लोरस्सरिनले प्रदूषणको सामना गर्न सक्छ।
औषधिबाट मुक्त गर्न धेरै तरिकाहरू छन्। एक पटक जब तपाईले औषधि र सावधानीपूर्वक औषधि प्याकेज गर्नुहुन्छ, तपाइँ एक औषधि लेक ब्याक प्रोग्राम प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ, जुन निर्मातामा फर्किनु पर्छ। यदि यो कार्यक्रम पहुँच योग्य छैन भने, इजाजतपत्रित चिकित्सा बर्खास्त ठेकेदारहरूबाट मद्दत प्राप्त गर्नुहोस् जसले गर्दा उत्पादन उत्तीर्ण गर्दछ वा मान्यता प्राप्त ल्यान्डफिलमा घुमाउनेछ।
Lorcaserin Obeses बाट समीक्षा
केहि मान्छे केवल छह महिना को लागि Belviq मा छ, तर उनि एक महत्वपूर्ण परिवर्तन देख्न सक्छन्। उदाहरणको लागि, एक प्रयोगकर्ताले पूर्ण वर्षको लागि औषधि प्रयोग गर्नु अघि 20lbs पहिले नै गुमाएको थियो। वास्तवमा, यो आबादी को आधा पहिलो महिना भित्र 10 पाउन्ड सम्म हरायो।
धेरैलाई उद्धारकर्ताको बावजूद, लोरस्जरिन अल्पसंख्यकमा प्रभावशाली देखिन्छ। जबकि केवल 3lbs लाई हराने को लागि एक महिना को लागी केहि ले जाएगा, केहि ले कुनै पनि ध्यान देने योग्य लार्ससेसर परिणाम नहीं दर्ता गर्नेछन्। यसको विपरीत, यो समूहले उनीहरूको भूख नाटकीय रूपमा बढ्यो।
साइड इफेक्टहरू बन्द छन्!
90% जसले लोभले लोरस्सरिन लिँदा एक महिनाको अन्त्य गर्दछ जुन व्यक्तिहरूलाई प्रभावकारी असरबाट भयानक महसुस गर्छन्। प्रायः प्रयोगकर्ताहरूले अनिवार्य, पागल चिन्ता, सिरदर्द, आचरण, चक्करपना, नली, र अनियमित हृदयघात सहन सक्दैन।
यद्यपि अधिकांश मानिसहरू यी लक्षणहरू अनुभव गर्नेछन्, केही प्रयोगकर्ताहरूले भनेका छन् कि साइड इफेक्टहरू अल्पकालिक थिए। औसतमा, यो लोरस्सरिनको पहिलो दुई हप्ता भित्र मात्र ध्यान दिइनेछ। पर्याप्त दिलचस्प, उपभोक्ताहरूको 2% को बारेमा कुनै पनि प्रभावको सामना गर्दैन।
लोरसेजरिन समीक्षाहरूबाट, प्रयोगकर्ताहरूको 88% ले सहमति गरेको छ कि तिनीहरूका भूखहरू उल्लेखनीय रूपमा कम छन् किनभने तिनीहरूले लोरस्सरिन प्रयोग गर्न थाले। यो अजीब cravings र भावनात्मक खाने वालों संग यो फायदेमंद छ। यदि तुलना तुलना गर्नु अघि खण्ड एक खण्ड र अहिले तिनीहरूले के खाँदै छन्, फरक फरक आधा वा कम छ। केही व्यक्तिले आफैलाई खान पाउँथे किनकि भोजनको चाहना दिनका लागि हराउन सक्छ।
केही व्यक्तिका व्यक्ति जसको भूखान प्रभावित भएन उनीहरूको लागि अन्य वजन घटाएको थियो। केहि गर्न, आफ्नो स्लिमिंग कार्यक्रम मा शामिल व्यायाम कम भूख को आधार मा वजन कम गर्न मा एक ठूलो भूमिका निभाई।
30-दिन आपूर्ति 330 रकमको लागि जान्छ। केहि बीमाले औषधि खरिद गर्न लागतहरू पूरा गर्दैन। त्यस्ता अवस्थाहरूमा, एक वा त निर्माताको कूपन र विशेष छुट कार्डमा भर पर्दछ वा जेबमा गहिराइ खोल्नुहोस्। जब भाग्यशाली हुन्छ, तपाईले $ $ 50 को रूपमा तिर्न सक्नुहुन्छ।
यदि तपाइँले एक वर्ष भन्दा कम $ 15,000 बनाउनुहुन्छ भने, तपाईंले आफ्नो शरीरलाई अधिक वजनको लागी राम्रो चेतावनी दिएको थियो। एक वजन-हानि व्यवस्थापन योजना तपाईंको खाता डेलिभिजन गर्ने एक निश्चित तरिका हो।
Lorcaserin तपाईं लाई एक लत सजिलै संग आफ्नो प्रणाली को परिचय को एक पन्ध्र दिन बनाउन सक्छ। ती औषधिहरू रोक्न गर्नेहरूले साइड इफेक्टहरू अनुभव गर्न सम्भव छन्।
Lorcaserin एक रासायनिक यौगिक हो जुन नैदानिक ​​परीक्षणहरू, चिकित्सकीय प्रयोगहरू, र मोटापेस्ट औषधिहरूको खोजी प्रयोग गरिन्छ। Lorcaserin हाइड्रोक्लोराइड को गठन भएको छ जब लोरस्सरिन हाइड्रोक्लोरिक एसिड संग प्रतिक्रिया गर्दछ।
यो पदार्थ केवल अनुसन्धानका लागी प्रयोगशालाहरुमा आपूर्ति गरिएको छ। यो मानव वा पशु प्रयोगको लागि सुरक्षित छैन।
2. Lorcaserin गोलियाँ
Lorcaserin दुई ब्रान्ड नामहरू अन्तर्गत उपलब्ध छ। तपाईं या त lorcaserin खरिद गर्नुहोस् एचसीएल को रूप मा Belviq® या Belviq XR® गोलियाँ। दुवै ब्रान्डहरूमा सक्रिय घटक लोरस्सरिन हाइड्रोक्लोराइड हो।
यो वजन घटाने औषधि एक 10mg ट्याब्लेट हो जुन दिनमा दुई पटक लिइन्छ। यो राउन्ड-आकार, biconvex, नीलो रङ, र फिल्म लेपित एक पक्षमा 'ए' र विपरीत '' 10 'मा' हो। प्रत्येक बोतलको कुल 60 ट्याबलेटहरू छन्।
आकार गोलो; biconvex
छापिएको कोड A; 10
मात्रा प्रति बोतल 60 ट्याबलेट
Lorcaserin हाइड्रोक्लोराइड hemihydrate
यी अवयवहरू निरन्तर रूपमा प्रतिकूल प्रतिक्रियाहरू र साइड इफेक्टहरूका लागि उत्तरदायी सामग्रीहरू हटाउन संशोधन गरिएका छन्, विशेष गरी औषधी अन्तरक्रियाका क्रममा।
Polyethylene ग्लाइकोल 3350
FD र C ब्लू # 2
यो एक 20mg विस्तारित रिलीज ट्याबलेट हो एक दिन एक पटक लिइएको छ। Belviq® को विपरीत, यो ब्रान्ड नारंगी ट्याब्लेटहरू आपूर्ति गर्दछ। यद्यपि, तिनीहरू पनि गोल, biconvex, फिलिम लेपित छन्, र एक पक्षमा 'ए' संग उत्कीर्ण र विपरीत अन्त मा '20'। Belviq XR® को बोतल 30 ट्याब्लेट छन्।
छापिएको कोड A; 20
मात्रा प्रति बोतल 30 ट्याबलेट
Polyethylene ग्लाइकोल 400
Polyethylene ग्लाइकोल 8000
फरेरिक अक्साइड रातो
फेरिक अक्साइड पहेंलो
हिप्रोमोरोजोज 2910 (15 MPA.S)
एफडी र सी पहेंलो # 6
Lorcaserin खरिद गर्नुहोस् एचसीएल अनलाइन
1. Lorcaserin लागत
Lorcaserin एचसीएल लागत
लोरस्सरिन हाइड्रोक्लोराइड को लागत (846589-98-8) तपाईंको स्थानमा निर्भर गर्दछ, तपाईं किन खरिद गरिरहनुभएको भण्डार, र प्रश्नमा मात्रा। उदाहरणका लागि, उत्पादनको एक मिलिमिटर तपाईले जितेर $ 50 खर्च गर्नुहुनेछ। तथापि, ठूलो मात्रामा जाने हुन सक्छ प्रति मूल्य 1g प्रति डलर वा केहि कम गर्न।
60 क्याप्सुलसँग Belviq बोतल (Belviq XR® सँग 30 ट्याब्लेटहरू) तपाईंलाई एक महिनामा पुग्नेछ र यो $ 220 र $ 330 बीचको लागत हुनेछ। मूल्य लोरस्ज़रिन गोलीमा निर्भर छ जुन तपाईले लिनु हुनेछ Belviq XR® Belviq भन्दा केहि डलर उच्च लागत। केहि बीमा कम्पनीहरुले शुल्कको अंशलाई आवरण गर्न सक्छ, यसरी तपाईलाई भुक्तानी गर्न उचित रकमको साथ छोडेर। यसको अतिरिक्त, तपाईं Belviq देखि केहि विशेष कूपन र डिस्काउंट कार्ड प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ, तपाईंले कम तिर्नु भएको छ।
2. कसरी Lorcaserin किन्नुहोस् एचसीएल
Belviq खरीद को परेशानी एफडीए कानून हो कि तपाईंलाई एक चिकित्सक को पर्चे को आवश्यकता छ। तथापि, लोरस्सिनको लागि किनमेल कुनै बाध्यता छैन, बाहेक तपाईं अनुसन्धान अनुसन्धान क्षेत्रमा एक पेशेवर हुनुहुन्छ।
धेरै अनलाइन स्टोरहरूले तपाईंलाईसँग खाता दर्ता गर्न, तपाईको आफ्नै पोर्टल सिर्जना गर्न र मूल्य निर्धारण हेर्न आवश्यक छ। तपाईं आफ्नो गाडीमा मात्रा जोड्न र एक अर्डर राख्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँ कुनै विशेष ढुवानी शुल्क छैन किनभने लोरस्सेसर एचसीएल सबै यातायातको लागि सुरक्षित छ।
लोरस्केसन नियन्त्रणमा छ?
यद्यपि एक उत्तेजना छैन, लोरस्सेसरको लागी औषधी निर्भरता र दुर्व्यवहारको कारण हुन सक्छ। यस कारणको लागि, औषधि प्रवर्तन प्रशासन (DEA) ले यसलाई अनुसूची IV मा नियन्त्रण सामग्री अधिनियममा सूचीबद्ध गर्दछ।
त्यसोभए तिनीहरूले कसरी एक खुट्टा नियन्त्रण गर्छन्? म व्याख्या गर्नेछु। एक ओभरडोज आकस्मिक हुन सक्छ तर त्यस पछि यो पनि प्रयोगकर्ता उत्तेजित गर्ने जानबूझिक चाल हुन सक्छ। भक्ति ल्याउनको लागी, तपाइँ केवल सीमित समयका लागि नुस्खा मात्र फर्काउन सक्नुहुन्छ।
लोरस्सरिन को केहि साइड इफेक्ट शामिल हर्ष, भावना 'उच्च', झुकाव, या उत्साह। केही अवस्थामा, खुवाउने केही रोगीहरूले केही फिर्ता लक्षणहरू प्रदर्शन गरे। यी सबै कारकहरू पर्याप्त प्रमाण हुन् कि दबाइले मानसिक निर्भरता हुन सक्छ।
लोरस्सिन लिँदा तपाईं काम गर्न सक्नुहुन्छ?
लोरस्सरिन को प्रभावकारिता पनि शारीरिक गतिविधि र कम-क्यालोरी सेवन संग सम्बन्धित छ। जबसम्म तपाईं लोरस्सिन लिनुहुन्छ, नियमित कार्यवाही तपाईको जीवनशैली हुनुपर्छ। यो प्रयोग गर्नेहरूको एक भागले विश्वास गर्दछ कि व्यायामले केवल औषधिको आधारमा व्यायामको वजनमा यात्रा गर्दा मुख्य भूमिका खेलेको छ।
के लोरस्केसन तपाईंको शरीरमा जोखिम छ?
यद्यपि साइड इफेक्ट्स केहि सानो हो र हप्ता हप्ता वा दुई पछि गायब हुन्छ, अरुलाई गम्भीर हुन सक्छ र जीवन धम्की हुन सक्छ। अनुसन्धानले यो प्रतिकूल प्रतिक्रियाहरू घटनाको कम सम्भावना छ भनेर देखाउँछ। यसैले, तिनीहरूको आवृत्तिको अनुमान लगाउन निकै गाह्रो छ।
प्रमुख अमेरिकी अध्ययनले लेजरसेसनसँग सम्बद्ध हृदय रोगको बारेमा दावीहरू खारेज गरे तर यो पनि नयाँ निष्कर्षमा आए। यहाँ लोरसेसर जोखिमको एक सिंहावलोकन हो;
यो बेला बेला बेला बेलायतमा Belviq ले, जब serotonin रिसेप्टरहरू सक्रिय वा सक्रिय पार्छ। यी औषधिहरूमा अवसादहरू, मानसिक समस्याहरू, टाउको दुख्ने र सामान्य चिसोको उपचार गर्नेहरू छन्।
कम रक्त शर्करा मात्र टाइप2मधुमेहबाट पीडित व्यक्तिहरूमा हुन्छ। यदि तपाईं चीनी स्तरको निगरानी गर्न र आफ्नो मधुमेह दबाइ समायोजन गर्न असफल भएमा तपाइँ आफ्नो जीवन जोखिम हुन सक्छ।
Lorcaserin गोलहरू 5-HT को सक्रियणको कारण हृदय वाल्व क्षति हुन सक्छ2B रिसेप्टरहरू। तथापि, यस प्रभावमा कम घटनाहरू छन् किनभने औषधिसँग 5-HT को लागी उच्च सम्बन्ध छ2C अन्य 5-HT रिसेप्टर भन्दा अध्ययनले देखाउँछ कि लोरस्सरिन लिने व्यक्ति र placebo मा समूह कुनै महत्त्वपूर्ण फरक फरक पर्दैन जब वाल्वुलर हृदय रोगको लागि परीक्षण गरिन्छ।
यो एक दर्दनाक निर्माण हो जुन चार घण्टा भन्दा बढीको लागि रहनेछ। यदि उपचार नगरिएमा यसले टिश्युमा स्थायीतर्फ धकेल्न सक्छ।
लोरस्सरिनमा मैले कति वजन गुमाउनेछु?
यदि तपाइँ शारीरिक गतिविधिहरू र तपाईंको जीवनशैलीमा स्वस्थ आहार समावेश गर्नुहुन्छ भने, तपाइँले अधिक पाउन्ड गुमाउने सम्भावना छ। हप्ता 12 द्वारा, तपाईले कम से कम तपाइँको शरीरको वजनको 5% गुमाउनु पर्छ। जब यो हुने छैन, त्यहाँ Belviq को लागि काम गरिरहेको कुनै आशा छैन।
लोरस्सेसरको समीक्षाबाट हामीले नमूना गर्न सक्दछौं, धेरै व्यक्तिले सूचना दिएका थिए कि पहिलो महिना सम्म 10 - 15lbs को बीचमा हरायो।
के तपाई Belviq वा त्यस्ता भूख suppressant कोसिस गर्नुभयो र यसले काम गरेको छ?
प्रयोगकर्ता शब्दावली को 90% साबित गर्दछ कि लोरस्सिनिन काम गर्दछ। जनसंख्या को बाकी को लागि, दबाइ हुन सक्छ प्रतिकूल प्रतिक्रियाहरु या प्रभावकारी थियो। यस्तो अवस्थामा, डाक्टरले तपाईंको खुराक रोक्न र वैकल्पिक वजन घटाने औषधीको वर्णन गर्दछन्।
यदि एक भूख suppressant तपाईं को लागि काम गर्न असफल भएमा, एक औषध विशेषज्ञ सिफारिस गर्न सक्ने अन्य विकल्पहरू छन्। अहिले सम्म, एफडीए ले फिन्टर्मिन (क्व्समिया), orlistat अनुमोदन गरेको छ, naltrexone (आलोचना), र liraglutide।
सारांश Lorcaserin मा एचसीएल (Belviq)
वजन घटानेको औषधि Lorcaserin मोटाइ र अधिक वजन को रोगीहरु को लागि छ, विशेष गरी वजन-कम comorbidities देखि पीडित। औषधिमा धेरै जीवन-खतरनाक जोखिम र शरीरमा प्रतिकूल प्रभावहरू छन् तर तपाईले डाक्टरको सल्लाह पछ्याउँदा, तपाईं सुरक्षित साइडमा रहनुहुनेछ।
Lorcaserin को आवश्यकता छ कि तपाईं आफ्नो सम्पूर्ण जीवन मा वा पर्चे अनुसार को प्रयोग जारी राख्नु पर्छ। यदि तपाईं 20lbs खोने को एक वर्ष पछि एक ब्रेक दिनुहुन्छ भने, केहि अतिरिक्त पाउंड संग एक समान मूल्य प्राप्त गर्न को लागि तैयार हो।
यद्यपि धेरै महँगो भए तापनि Belviq वेबसाइटमा बचत, कुपन, र छुट कार्ड उपलब्ध गर्न प्रयोग गर्नुपर्दछ। The lorcaserin लागत यदि तपाईंको बीमाले शुल्कको भाग समावेश गर्दछ भने पनि घटाउनेछ। यो मासिक पर्चे मा $ 300 खर्च गर्नु अघि जोखिम मा शामिल स्वास्थ्य र स्वास्थ्य लाभ को लागि सल्लाहकार छ।
बोहोला, एरिन ए, विवोइट, स्टीफन डी।, म्याकरेयर, डरेन के., इन्जुची, सिल्भियो ई।, एट अल .: लोर्कोसरिन को कार्डियोवास्कुलर सुरक्षा अधिक वजन या मोटापे रोगी, औषधिको नयाँ इङ्गल्याण्ड जर्नल, 2018
खाद्य र औषधि प्रशासन, उपचार लक्ष्य लक्ष्य लामो समय सम्म वजन नियन्त्रण, अनलाइन, प्रकाशित 17 जुलाई 2012
एशले ग्यासफसन, सिमिल राजा, जोस एआर, जैव प्रौद्योगिकी सूचना, पीएमसी लेख, मेडियामीडिया, संयुक्त राज्य अमेरिका Lorcaserin (Belviq), अनलाइन, सेप्टेम्बर 2013
किन सिब्रामामिन वजन घटाने मा धेरै लोकप्रिय छ?
9 प्रश्नहरू Avanafil लिनु अघि आफैलाई सोध्न प्रश्नहरू